Thursday 19th of October 2017, 5:48:32 am
६ गुणासम्म बढ्यो काठमाडौंमा जग्गाको मूल्याङ्न
Thursday 12th of October 2017, 09:20 AM
काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि जग्गाको मूल्याङ्कन रकममा ६ गुणासम्म वृद्धि गरेको छ । पालिकाले महानगरभित्रका ३२ वटै वडाको नयाँ जग्गा मूल्याङ्कन रकम ताकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७३/७४ सम्म फेरबदल नभएको जग्गा मूल्याङ्कन रकमलाई गत असार ३१ गते काठमाडौं महानगरपालिको नगर सभाले परिमार्जन गरेको हो । नयाँ मूल्यांकनअनुसार सबैभन्दा कम मूल्य भएको जग्गा वडा नं १५ मा रहेको छ । जसको सरकारी मूल्य प्रतिरोपनी २७ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ...
Wednesday 11th of October 2017, 08:36 PM
काठमाडौं, असोज २५ । लोकसेवा आयोगले रिक्त कर्मचारी पदपूर्तिका लागि दर्खास्त आह्वान सुरु गरेको छ । ‘कर्मचारी समायोजन ऐन’ संसदबाट पारित भएपछि आयोगले सरकारलाई चाहिने कर्मचारीे पदपूर्ति बुधबारबाट सुरु गरेको आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।आयोगले पहिलो चरणमा सहसचिव र उपसचिवका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको हो । उनकाअनुसार आयोगले १९९ सहसचिव र ५५६ उपसचिवका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको छ ।उपसचिवसमेत रहेका सुवेदीले सहसचिवमा...
निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा आन्दोलन घोषणा
Wednesday 11th of October 2017, 08:27 PM
काठमाडौं, असोज २५ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्यारा पत्ता नलागेसम्म कुनैपनि बोलपत्रमा सहभागी नहुने जनाएको छ । महासंघले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी हत्या भएको ४८ घन्टासम्म पनि हत्यारा पत्ता नलाग्नु गृह प्रशासनको ठूलो कमजोरी रहेको जनाएको छ । महासंघले अध्यक्ष गौचनको हत्याको विरोध एवं हत्यारा पत्ता लगाउन दबाब दिन आन्दोलनको घोषणा पनि गरेको छ । महासंघले असोज २६ गते उपत्यकाको माइतीघरमन्डला, कोटेश्वर र...
बर्षौ देखि प्रेत-आत्मा संग बस्ने अचम्मकी महिला(फोटो सहित)
Wednesday 11th of October 2017, 08:10 PM
बर्षौ देखि प्रेत-आत्मा...
एजेन्सी,कस्तोअचम्मको मानिस पनि हुन्छन यो दुनियामा, भुत आत्मा भन्न विबित्त्कै सामान्य व्यक्तिमा डर त्रास उत्पन्न हुनु पनि स्वाभाविक नै हो तर तर यो दुनियाँमा एउटा यस्ती युवती छिन् जो यस्ता डरलाग्दा भुतात्मासँग बस्न सिकेकी छन् ।यी युवतीको नाम हो, रेबिका । उनी आफ्नो कुकुरसँग घरमा बस्छिन् । उनको घरमा दिनहुँ अनौठो खालको आवाज आउँछ । घरमा पहिले बस्ने गरेको कुनै मानिसको जस्तो हुन्छ रे आवाज । हालै एक दिन उनी आफ्नो कुकुरसँग सुतेकी थिइन् । अचानक कुकुरको आँखा...
जानी राखौ,कुन राशी भएका व्यक्ति कस्तो पेशा अपनाउदा सफल हुन्छ्न् त?
Wednesday 11th of October 2017, 07:55 PM
कुनैपनि काम थाल्नुअघि ज्योतिषशास्त्र अनुसारको ठाउँ र समय हेर्ने चलन पूरानो हो । यसो त ज्योतिषशास्त्र एउटा अनौठो विज्ञान हो जसलाई सारा विश्वले कुनै न कुनै रुपमा स्वीकारेको छ । तपाईंको राशी अनुसार काम नगर्दा कतिपय अवस्थामा तपाईं असफल पनि हुन सक्नुहुनेछ । पढाइका लागि कुनै विषय छान्दा होस्, वा कुनै व्यापार गर्दा कुन राशिलाई कुन जागिर वा व्यापार फाप्छ त रु हामीले बरिष्ट ज्योतिषहरुसँग गरेको कुराकानीका आधारमा निष्कर्ष निकालेका छौं । हेरौं कुन...
कांग्रेसको ‘शक्तिशाली’ संसदीय समिति गठन, यी हुन् समितिका १७ जना
Wednesday 11th of October 2017, 07:38 PM
काठमाडौं, असोज २५ । नेपाली कांग्रेसले आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्न १७ सदस्यीय केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार संसदीय समिति गठन गरेका हुन् । कांग्रेसको विधानअनुसार संसदीय समितिले निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्ने तथा सरकारमा जाँदा मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउने भएकाले पार्टी संरचनामा यो समितिलाई शक्तिशाली मानिन्छ । नेपाली कांग्रेसको विधानमा १५ सदस्यीय संसदीय समिति रहने...
चितवनमा काँग्रेसले रेणु जिताए, रेणुले एमाले
Wednesday 11th of October 2017, 07:14 PM
काठमाडौं : जिल्ला समन्वय समिति चितवन ‘जिसस’को ९ सदस्यीय समिति निर्वाचनमा नेकपा एमालेको प्यानेलनै विजयी भएका छन् । चितवन जिसस प्रमुखमा नेकपा एमालेका कृष्णकुमार डल्लाकोटी निर्वाचित भएका छन् । बुधवार भएको जिससको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका भरत अधिकारीलाई हराउँदै डल्लाकोटी निर्वाचित भएका हुन् । डल्लाकोटीले ११ मत ल्याए भने उनका प्रतिस्पर्धी अधिकारीले ३ मत ल्याए । त्यस्तै उप प्रमुखमा पनि नेकपा एमालेकै मुनाकुमारी श्रेष्ठ ११ मतसहित विजयी भइन् ।...
गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीको बाँडफाँड कस्तो हुँदैछ ?
Wednesday 11th of October 2017, 02:03 PM
काठमाडौँ । प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा ६० र ४० को अनुपातमा उम्मेद्वारी दिने सहमति गरेका बामगठबन्धनबीच कुन प्रदेशमा कसले मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा पनि संवाद शुरु भएको छ । अहिलेसम्म एमालेले चार र माओवादीले तीन प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लिने गरी छलफल भैरहेको स्रोतको भनाई छ । स्रोतका अनुसार १, ३, ४ र ७ प्रदेशमा एमालेले मुख्यमन्त्री र २, ५ र ६ मा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने गरी छलफल भएको छ । यद्यपि ५ नम्वर प्रदेशमा पनि एमालेको दावी कायम छ...
उम्मेदवार चयन गर्न काँग्रेसद्वारा संसदीय समिति गठन
Wednesday 11th of October 2017, 09:24 AM
काठमाडौँ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्न संसदीय समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका वरिष्ठ नेतालगायतसँग आवश्यक परामर्श गरी मंगलबार संसदीय समिति गठन गरेको नेता विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए। यद्यपि, समितिमा रहेका नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। यही असोज २० गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रतिनिधि सभा...